Vaovao - fanariana fitaratra rano, scaffolding, scaffold amin'ny ringlock, mpampitohy birao, mpampitohy scaffold
Ny fandefasana dia ampahany amin'ny vidiny lafo kokoa amin'ny Sambo scaffold accessories, ny kalitao dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana ny teboka scaffold sy ny ain'ny asa fanompoana an'ny torolalana, noho izany amin'ny safidintsika ny filatsahana casting dia tsy maintsy manazava ny masontsika koa isika. Androany dia te hiresaka momba ny filatsahana izahay.
Ny filaharana lehibe amin'ny scaffold dia ny: konektor ledger, mpampifandray ampira-diagonaly. Amin'izao fotoana izao dia misy dingana roa lehibe amin'ny famolavolana scaffold Ringlock, ny iray dia fasika, ny iray vera rano, inona ny fahasamihafana misy eo amin'ireo dingana roa, ahoana no tokony hisafidianantsika? Mamelà ahy hizara aminao ny sasany amin'ny zavatra niainantsika.
Manazava ny fizotry ny fantsom-pasika sy fitaratra rano
Fanariana fitaratra rano
Ny vera rano toy ny fantsom-pako sy ny fasika quartz dia mifangaro amin'ny ampahany iray hanaovana fasika amboarina, izay sitrana amin'ny alàlan'ny fitsofana dioksidan'ny karbaona aorian'ny fanamboarana ny lasitra, ary avy eo dia nakarina, nikatona ary narotsaka tao anaty filatsika ny bobongolo.
Fanariana casting fasika
Ny fasika quartz dia hafanaina ao anaty milina fampifangaroana fasika, ary ny resina, ny mpitsabo mpanasitrana ary ny anti-simenitra dia nampiana mba hametrahana ny tampon'ny fasika quartz rakotra sarimihetsika resin. Aorian'ny fanamiana ny fampifangaroana dia avoaka ny fasika quartz hampangatsiaka sy hanorotoroana ny standby ary mila hafanaina sy sitrana ny fampiasana.
Amin'ny ankapobeny, ny famokarana sand Sand dia lafo, ambany; Ny famokarana vera Rano dia ambany ary lafo ny vidiny. Raha ny vidin'ny tsena dia ny vidin'ny mpampitohy fitaratra rano dia in-2 heny noho ny mpampitohy ny fasika!